Izindaba - Solar Power System Fires And Blasted Rooftop Isolator Switches
Kube nezehlakalo eziningana zomlilo eNew South Wales evikini eledlule noma ngaleyo ndlela ezibandakanya izinhlelo zamandla elanga - futhi okungenani ezimbili kucatshangwa ukuthi zibangelwe ukushintshwa kwezihlukanisi ezisophahleni.
Izolo, abakwaFire and Rescue New South Wales babike ukuthi bebehambele isigameko esenzeke ekhaya eliseWoongarrah eCentral Coast ngemuva kokuthi oshaye ucingo kathathu ebike ukuthi kunentuthu ephuma ophahleni lwendlu.
"Izicishamlilo ezivela ezikhungweni zomlilo zaseHamlyn Terrace naseDoyalson zifike endaweni yesigameko ngemuva kwesikhashana zakwazi ukuwucisha ngokushesha umlilo nokuqinisekisa ukuthi awusabhebhetheki kakhulu," kusho abakwaFire and Rescue. "Uphiko lwezokuphenya ngomlilo nocwaningo lweFRNSW njengamanje lusasebenza ukuthola imbangela yomlilo, okukholakala ukuthi yaqala ngokushintshana."
NgoDisemba 30, izicishamlilo namaphoyisa babizelwa ekhelini elalisemaphethelweni edolobha laseNewcastle eBar Beach ngemuva kwemibiko yokuthi amalambu ophahla lwelanga ophahlwe yindlu ashunqa. Nakulokhu, umlilo wacishwa ngaphambi kokuba kwenzeke noma yimuphi umonakalo omkhulu wesakhiwo. Imbangela engaba khona ayizange ishiwo.
AbakwaFire and Rescue NSW bathi ngonyaka odlule imililo ephathelene nelanga yenyuke kahlanu eminyakeni emihlanu eyedlule, kodwa ayizange inikeze noma yiziphi izinombolo. Zingaphezulu kwama-600,000 izinhlelo zamandla elanga ezifakiwe eNew South Wales, futhi noma ngabe yikuphi lapho kuhileleke khona izinto zikagesi kuzoba nezehlakalo - kepha lokhu akumele kwamukelwe nje uma kukhona indawo yokwenza ngcono.
I-FRNSW phambilini ibike ukuthi ukushintshwa kwe-isolator sekube cishe isigamu semililo yamandla elanga esifundazweni. Ngenkathi inani labahlukanisi bezindlu ezisophahleni okuyibo abayimbangela yalo kungakhulunywa ngalo, kungenzeka iningi labo lanikezwa irekhodi lalawa madivayisi anezinkinga.
Iswitshi elisophahleni le-DC isolator yiswishi esebenza ngesandla efakwe eceleni kohlu lwelanga le-solar okwenza ukuthi i-DC yamanje phakathi kwamalungu afanayo ne-inverter yelanga icinywe. Kuyindida ukuthi yayihloselwe njengenye indlela yokuphepha futhi iyimfuneko yazo zonke izinhlelo zamandla elanga e-Australia. Kepha kubonakala ngathi ukuphela kwezwe elisadinga ukusetshenziswa kwabo.
Izifaki eziningi zelanga ziyakudelela ukuthi kufanele zifake ukushintshwa kwe-rooftop DC isolator futhi kunezinyathelo zokuthi imfuneko isuswe kumaZinga e-Australia - futhi lokho ngeke kusheshe kufike. Kukhona ne-Push yokuqeda izihlukanisi ezibekwe odongeni; esikhundleni salokho kudinga i-isolator efakwe ngaphakathi kwe-inverter yelanga.
Lokho kungukuthuthuka okumbalwa okungenziwa - okunye ngabanikazi abahlolwa amasistimu abo.
Ukushintshwa kwekhwalithi ephezulu ye-DC efakwe kahle futhi evikelwe ngempumelelo yindwangu ngokuvamile kuphephile. Isembozo ngesinye isidingo ebesivele sikhona isikhathi esithile kanti ukushintshwa kwe-isolator esigamekweni sayizolo bekungabonakali kunaso. Mhlawumbe ukufakwa kwangaphambi kwesidingo, kepha ukusetha ngokuvamile kubukeka kukubi.
Ukuphepha komlilo kungesinye isizathu esibalulekile sokukhetha isifaki esihle selanga. Kepha ngaphandle kwekhwalithi yengxenye nokufakwa futhi unikezwe izimo ezinzima zophahla lwe-DC isolator switch kanye nezinye izinto zesistimu yamandla elanga kufanele zikhuthazelele eminyakeni eminingi, kubalulekile ukuthi kwenziwe ukuhlolwa nokuhlolwa kwesistimu njalo eminyakeni embalwa.
UMichael wabamba isinambuzane samandla elanga ngemuva kokuthenga izinto zokuhlanganisa uhlelo olusha lwe-PV ngo-2008. Ubelokhu ebika ngezindaba zamandla elanga zase-Australia nezamazwe omhlaba kusukela lapho.
Ngemuva kwakho konke, yingakho bebeka isidingo sobuphukuphuku sokubeka abahlukanisi be-DC ophahleni, ukuze badale izinkinga, akunjalo?
Kufana nokudinga amasistimu wamanzi ashisayo ukuzala nokusabalalisa i-legionella, ngokuvimbela amanzi ashisayo kuma-heater amanzi.
Akukaze kuqondwe kahle ukuthi lowo mqondo we-DC isolator kufanele ube semapaneni ophahla. Umsebenzisi ojwayelekile ngeke avuke iladi ukuhlukanisa amapaneli nganoma yisiphi isizathu. Ama-isolators kufanele abe sezingeni lomhlabathi lapho kutholakala kalula.
Nginezinhlelo ezintathu zelanga. Eyokuqala efakwe ngo-2011. Ayikho i-DC isolator kuphaneli kepha kukhona i-DC isolator eceleni kwe-inverter.
Uhlelo lwesithathu lufakwe ku-2018, lunama-DC isolators kuma-panels ophahla futhi liseduze kwe-inverter (isethi ephindwe kabili ye-DC isolators).
Isembozo sigcina ilanga licishe kushintshi le-DC isolator elisiza ekumiseni ukuthi lishise kakhulu futhi livimbela nokonakala kwe-UV. Iphinde igcine imvula embi kunazo zonke.
Ama-ADELS NL1 Series DC Isolator Switches asetshenziswa ku-1-20KW uhlelo lokuhlala noma lokuhweba lwe-photovoltaic, olubekwe phakathi kwamamojula we-photovoltage nama-inverters. Isikhathi sokugoqa singaphansi kwama-8ms, okugcina uhlelo lwelanga luphephile kakhulu. Ukuqinisekisa ukuqina kwayo nokuphila kwayo isikhathi eside, imikhiqizo yethu yenziwa ngezinto ezinekhwalithi enhle kakhulu. Amandla we-Max afinyelela ku-1200VDC. Iphethe ukuhola okuphephile phakathi kwemikhiqizo efanayo.
Isikhathi Iposi: Jan-12-2021